Horumarka iyo Waajibaadka Bulshada: Qalinkii Suleiman Bashir Omar | Gacanlibaaxnews
Horumarka iyo Waajibaadka Bulshada: Qalinkii Suleiman Bashir Omar
Allaa mahad leh, ammaan oo dhan isaga ayaa leh, qofkuu hanuuniyo ayaa hanuunsan, ninkuu lumiyana wax hanuunin karaa ma jiraan. Waxaan jeclahay inaan qormadan kaga hadlo intan awoodo wadada loo maro horumarka iyo waajibaadka saaran bulshadda.
Bulsho waa dad meel kuwada nool oo isku degaan ah, lehna astaan iyo dan guud oo isku mid ah. Horumarka bulshaddu waa horay usocod iyo himilo sare hiigsasho ay bulshadaasi ku ruqaansato ama ay gaarto heer nololeed ama horumar ka wanaagsan heer keedii hore, Taasoo la odhan karo bulshadaasi waxay ku talaabsatay horumar muuqda oo la taaban karo umadaha kalena kaga daydaan.
Horumarka bulshadda waxaa lagu tilmaamaa hayaan dheer iyo howl adag oo dadka oo dhan kaalin ku leeyihiin, qof walba oo bulshada ka mid ahna uu ka qaadan karo kaalin mugleh. Hadii qof walba uu kasoo baxo kaalintiisa kaga aadan horumarka bulshada waxay dhaxalsiisa ummadaasi inay gaaraan horumar muuqda mudayar gudehood. Tacabka iyo miradhalka horumarkaasina noqonaayo mid udhexeeyo dhamaan qeybaha bulshadda oo dhan.
Hadaba waxa lagu gaadhi karaa horumar bulshada looga baahan yahay
Waa in bulshadu leedahay hogaamiyayaal ku haga wadada saxda ah ee lagu gaadhi karo horumar iyagoo bulshada ugu adeegaya si daacad ah oon lahayn dad eex iyo kala sooc, dadkana ku dhiiri galiya horumar iyo wax wada qabsi.
Waa in bulshadu noqotaa mid isku xiran dal iyo dibad oo diyaar u ah inay gaaraan horumar si qof kastaa u guto waajibaadka ka saaran Bulshadiisa iyo Deegaankiisa, waayo qofkastaa waxa uu masuul kayahay horumarka bulshada iyo Deegaanka.
Waa in Bulshadu leedahay Hami sare oo ay ku horumariso deegaankeeda iyadoo hiigsanaysa himilo fog iyo mustaqbal wanaagsan si ay ula tartanto umadaha horumaray, tusaalena ugu noqoto bulshooyinka danbe.
Waa in bulshada leedahay dan guud oo lagu midaysan yahay, kana go’an tahay inay iskeed wax u qabsato, si ay u horumariyan Waxbarashada, Caafimaadka, wadooyinka, Ilaalinta Deegaanka iyo Dhamaan baahiyaha kale ee bulshada.
Waa in la xoojiyo xidhiidhka, Istaageersiga iyo wada shaqaynta bulshada iyadoo lagu midaysan yahay dan guud iyo horumar waara. Waana in qofkasta oo bulshada ka mid ahi diyaar u yahay inuu kaga qaybqaato Maskax, Maal iyo Muruq. Qofkastaana ha ogaado inuu wax tari karo Bulshadiisa, kaalin muuqatana ku leeyahay horumarka bulshada.
Waa in bulshadu ka fogaata dhamaan wixii carqalad ku noqonaya horumarka bulshada sida Hadalo la isku tuur-tuuro, Muran iyo Isqab-qabsi ka dhex dhasha bulshada oo kala fogaynaya midnimada iyo wada noolaanshaha bulshada, kaas oo sababa dib-u dhac ku yimaada Horumarka, Dhaqaalaha iyo Nabada.
Hadaba waxan ku soo gunaanadayaa in bulshadu yeelato himilo sare iyo dadaal ay ku hiigsanayso inay ku gaadho horumar balaadhan oo dhinac walba ah Si loo gaadho wadada saxda ah ee wax lagu qabsan karo waxna lagu horumarin karo, iyadoo laga tanaasulayo kala qaybsanaanta. Dadka Maanta dayaxa haybsadey waa kuwo muujiyey isku duubni iyo wax wadaqabsi marka waa inaynu ka dayanaa kuwaas dayaxa tagay.